मेरो पट्टु, मेरो बिरालो :: Press Chautari ::
यसपल्ट सुगाले एकपल्ट मात्र बोलायो। र, आकाशै च्यातिनेगरी करायो। पखेटा भ्यात्त–भ्यात्त फड्फडाए। यस्तो सुगाले अहिलेसम्म गरेको थिएन। के भएछ ? म निद्रामै थिएँ। झस्किदै उठेँ।
कठै, पिँजरा किलाबाट उछिटिउँलाझैं बेस्मारी हल्लिरहेको थियो। त्यसमा सुगा थिएन। पिजराका खियादार मसिना तार भाँच्चिएका थिए।
लौ, केले तानेर लग्यो सुगालाई ?
मेरो मुटु चिसो भयो। पिजरा झुन्डिएकै ठाउँनेर दुई घरका भित्ताबीच मसिनो चर थियो, त्यतै लगेको हुनुपर्छ। चर मान्छे पस्न सक्ने खालको थिएन। भित्रसम्म चिहाएँ, केही देखिनँ।
के गरूँ के गरूँ भयो।
अत्तालिएर फेरि पिजरातिर हेरेँ, त्यो अझै हल्लिरहेकै थियो। सुगाका चुँडिएका प्वाँख भने हुरी चल्दा खसेका सालका हरिया पातझैं झरिरहेका थिए।
४८ सालतिरको कुरा होला, कैलाली मटेराको। म ५ मा पढ्थेँ। स्कुल जान भनेर घरबाट त हिँड्थेँ तर दिन सालघारीमा घुमेर बिताउँथेँ। त्यसमा मलाई पूर्णेले साथ दिन्थ्यो, ऊ पढ्नमा भन्दा रुख चढ्नमा सिपालु थियो। कतै रुखका प्वाल देख्यो कि हात छिराइहाल्थ्यो। एकपल्ट त सर्प गुँडुल्किएको प्वालमा हात छिराएछ, अत्तालिँदै रुखबाट भाँचिएको हाँगाझैं तल खसेको थियो। रुख होचो थियो, त्यसैले खासै केही भएन। तर, तीन दिनसम्म खोच्याउँदै हिँड्यो। रुखबाट खस्दा बेस्मारी ठोक्किएर उसका अन्डकोष साइजभन्दा डबल भई फुलेका थिए रे।
पूर्णेको शरीर हरेक दिन कतै न कतै ददारिन्थ्यो। अनुहार पनि त्यस्तै धर्कैधर्काले भरिएका थिए। रुख चढेको थाहा पायो कि बाउले पिच्च–पिच्च सुर्ति थुक्दै हातमा जे आउँछ त्यसैले हिर्काउँदै सारा मटेराभरि उसलाई फनफनी रिंगाउँथे।
मलाई रुख चढ्न डर लाग्थ्यो। त्यसैले कर गरीगरी उसलाई लिएर म सालघारी फन्का लगाउँथेँ। किनभने, मलाई सुगा चाहिएको थियो। मटेराका घरहरूमा त त्यति सुगा थिएनन्, थारू गाउँमा त घरैपिच्छे सुगा।
ती सुगा मान्छे देख्नेबित्तिकै पिजराभित्र फनफनी घुम्दै कराउँथे, ‘राम राम – राम राम।’
मलाई पनि यस्तै ‘राम राम’ भन्ने सुगा पाल्ने रहर पलायो। एकपल्ट आमासित रोइकराइ पनि गरेको थिएँ, ‘सुगा ल्यादिनु के !’
‘तेरा बाले मार्छन्’ भन्दै आमाले डर देखाइदिनुभएको थियो।
बालाई सुगा पालेको मन पर्दैनथ्यो। मलाई सधैं बाको मुड्कीदेखि डर लाग्थ्यो, त्यसैले रहर मारेँ। सालघारीमा फेरि पात पलाउन थालेपछि मेरा रहर पनि पलाए। मैले थाहा पाइसकेको थिएँ, थारूहरूले त सबै सुगा रुखका टोड्काबाट झिकेर ल्याएका हुन् रे।
मटेराजस्तो गाउँमा देख्नलाई अरू पनि सपना हुन्छन् भन्ने मलाई थाह थिएन। त्यै भएर मेरो एउटै सपना थियो, सुगा। म त्यो सपना जसरी पनि पूरा गर्नेवाला थिएँ। भन्छन्– साँचो मनले सपनालाई पछ्याउनुपर्छ, त्यसले एकदिन अगाडि आएर घुँडा टेक्छ र शिर निहुराउँछ।
उराठलाग्दो गर्मीको दिन थियो। बेसरम घारीमा दिनभरि लुकीचोरी खेलेर पूर्ण र म सालघारी लाग्यौं। अचानक मैले एउटा सुगा भुर्र उडेको देखेँ। सुगा अग्लो सालबाट उडेको थियो।
‘एई पूर्णे, हेर् त, सुगा उड्यो,’ मैले अत्तालिँदै भनेँ, ‘यो रुखमा सुगाको गुड छ कि क्या हो ?’
सूर्य ठ्याक्कै रुखको टुप्तातिर थियो, त्यसैले एकछिन उसले निधारमा ख्याप्प हत्केला राखेर माथि हेर्‍यो। रुखका पातपातबाट घामको प्रकाश छ्यासमिस भएर छरिइरहेको थियो।
‘छजस्तो छ’ भन्दै उसले मैलो झोला भुइँमा फाल्यो। लामो सास फेर्‍र्यो र बादरझैं रुख उक्लिन थाल्यो। स्यार्र–स्यार्र पाइतालाले आफूलाई माथि धकेल्दै एकैछिनमा ऊ रुखको टुप्पातिर पुग्यो। एकछिन अल्मलियो।
लौ, टोड्को भेटेजस्तो छ।
उसले मतिर हेर्दै मुस्कुराउँदै टोड्कामा हात छिरायो। म तर्सिएँ। ए बा, फेरि टोड्कामा सर्प भेटिने हो कि ?
एकछिनसम्म टोड्को छामछुम गरेपछि पूर्णे मतिर हेर्दै खिस्स हास्यो। मैले थाहा पाइहालेँ, सुगा रैछ। खुसीले मेरा कुर्कुच्चा उचालिन थाले। पूर्णेले सावधानीपूर्वक सुगा सर्टको जेबमा हाल्यो र हतारिँदै बाँदरझैं स्यार्र–स्यार्र तल झर्न थाल्यो।
‘एउटै रैछ, क्यार्नी ?’ उसले पाइन्टको घुँडानेर लागेको धुलो टक्टकाउँदै सोध्यो।
‘मलाई दे न।’
‘नाइँ, म पाल्छु’ भन्दै उसले जेबबाट सुगा झिक्दै हत्केलामा राख्यो।
सुगा ठ्याक्कै एक पाउको मासुको डल्लोजस्तो थियो। छाला भुत्लाएको कुखुराको जस्तो देखिन्थ्यो। आँखा पनि उघ्रिएका रैनछन्। कत्तिपल्ट यसरी ल्याउँदा सुगाका बचेरा रुखमा ददारिएर मर्थे, यो भने जिउँदै रैछ। उसले सुस्त–सुस्त सास फेरिरहेको थियो।
‘मलाई दे न,’ रूँला–रूँला जस्तो गरेर भनेँ।
‘दिन त दिन्छु,’ पूर्णेले गम्भीर स्वरमा भन्यो, ‘तैंले सधैं मलाई हाफटाइममा रोटी दिनुपर्छ।‘
पूर्णेलाई जहिले पनि मेरी आमाले पकाएको रोटी मनपथ्र्यो। पातला र भुक्क फुलेका हुन्थे। यस्तो सुगा पाउनलाई त म हजार रोटीको रिन बोक्न सक्थेँ।
‘दिम्ला,’ मैले भनेँ।
उसले एकछिन सोच्दै ‘ला त’ भनेर सुगा मतिर बढायो।
सुगा मेरो हत्केलामा आयो। उसको ज्यान काँचो माटोझैं नरम थियो र चुच्चो सिन्दुर पोतिएजस्तो गुलाबी। एकछिन ढुंगाझैं शान्त भएपछि सुगा चल्मलायो। नंग्रा मेरा हत्केलामा बिझाए। अचानक उसले आफ्नो चुच्चोले मेरो चोरऔंला क्याक्क पार्‍यो।
दुखाइले मेरा आँसु पित्रिक्क निस्किए। म दुवै हत्केलाबीच सुगा च्यापेर घरतिर दगुरेँ। सुगाको ढुकढुकी बढ्दै गयो। अनि मलाई लाग्यो– मैले मुटु हत्केलामा च्यापेको छु।
‘फेरि काँबाट ल्याइस् !’ चल्मलाउन छाडेको सुगा देखेर आमा बम्किनुभो, ‘तेरा बाले मार्छन्।’
साँझ बा आएपछि जे त होला।
म सुगालाई काँ राखुँ भनेर अल्मलिएँ। बिरालो पनि मेरो हातको सुगा देखेर मेरा गोडामा लडिबुडी गर्न थाल्यो। बिरालो हाम्रै घरमा हुर्किएको थियो, दुधकै साक्षी राखेजस्तो पनि हुने।
एउटा बर्खेझरीमा खै कुन्नी कताबाट बिरालो हाम्रो घर आइपुगेको थियो। सानै थियो। झरीले लुछुप्प रुझेको थियो। त्यसपछि अन्त गएन। हाम्रो भयो। अझ मेरो। सुत्दा पनि मैसित सुत्थ्यो।
‘कुन दिन यसले एक गाँस बनाउँछ, अनि थाहा पाउँछस्,’ बिरालोतिर हेर्दै आमाले शंका देखाउनुभो।
‘पिजरामा राखेपछि खान्न।’
‘किन यस्तरी हुक्क पार्छस्, यई ?’ आमाले सुस्केरा हाल्नुभो, ‘कल्ले ल्यादिन्छ पिजरा?’
दैलोछेउको डेरीमा पूरानो बोरा फेला पारेँ र सुगालाई त्यसमै छोपछाप पारेर डेरीमाथि राखेँ।
‘साँझ बाउको थप्पड खाइस् भने रुँदै मकहाँ नआउनु’ भन्दै आमा भान्सातिर लाग्नुभो।
मैले फेरि बोरा अलिकति माथि उठाउँदै बिस्तारै काँपिरहेको सुगालाई हेरेँ, भोक लागेर होला सायद। थारूहरूले फट्यांग्रा खुवाएको खुवायै गर्थे, त्यसैले म फट्यांग्राको खोजीमा खेततिर दगुरेँ। बिरालो पनि पछि लाग्यो, पुच्छर नचाउँदै।
गहुँका हरिया पातमा एउटा फट्यांग्रा देखियो। म हातखुट्टा टेकेर लम्किएँ। सुस्त बिरालोले पनि पछ्यायो। पछाडिको एउटा खुट्टा के समाएको थिएँ, फट्यांग्रा छट्पटायो। मैले हतार–हतार फट्यांग्राका सबै खुट्टा उखेलेँ, टाउको निमोठिदिएँ।
आखिर फट्यांग्रो ठूलो गहुँको गेडोजस्तो देखियो। करिब आधा घन्टाभित्रमा मेरो सर्टको गोजीमा पाँचछ वटा फट्यांग्रा जम्मा भए।
म सुगातिर दगुरेँ।
बेलाबेला मेरा हत्केलामा ठुँग्दै सुगाले चारवटा फट्यांग्रा खायो। र, फेरि चल्मलाउन छाड्यो।
साँझ बा भान्सामा भात खाँदै हुनुहुन्थ्यो। म बाकै छेउमा थिएँ। सुस्त केही कराको आवाज आयो। आमाले मतिर हेर्नुभो।
मैले चुपचाप भात खाइरहेँ।
फेरि सानो आवाज आयो।
‘जा मर् त। सुगा कराको होला,’ आमाले भन्नुभयो। बाको डरले थुरथुर काप्दै बाहिर दगुरेँ।
बोराभित्र सुगा चल्मलाइरहेको थियो। मैले गोजीमा दुइटा फट्यांग्रा भेटेँ र सुगालाई दिएँ।
घरभित्र जान डरलाग्यो। अबेरसम्म बाहिर उभिरहेँ।
‘एई भात खा। फेरि काँ मरिस्?’ आमा कराउनुभो।
म लुरुक्क भित्र पसेँ।
बा अगेनाछेउ आँखा चिम्लेर बस्नुभएको थियो। शान्त आवाजमा सोध्नुभो, ‘सुगा ल्याछस्?’
म शिर निहुराएर उभिइरहेँ।
‘जाँबाट ल्याथिस्, भोलि त्यैं लगेर छोडेस्। नत्र मुड्क्याउँछु,’ बाले अगेनाको अगुल्टो चलाउँदै भन्नुभयो, ‘अब भात खा।’
मैले हतारहतार भात खाएँ।
बिरालोको डरले मैले सुगा रातभरि आफ्नै पलङमुन्तिर लुकाएँ। बेलाबेला ब्युँझिएर के गरिरहेको छ, हेर्थें।
बा बिहानै हिँडिसक्नुभएको रैछ। म भने ज्यान गए पनि सुगा छोड्नेवाला थिइनँ। डेरीकै छेउछाउ लुकाएर राख्न थालेँ। मैले फाटेको सर्ट ओछ्याएर सुगाको ओछ्यान बनाइदिएको थिएँ। सुगा चुच्चाले कपडा कोतर्दै बसिरहन्थ्यो। जंगलबाट मान्छेको भीडमा आएर होला, अलि डराए–डराएजस्तो पनि देखिन्थ्यो।
बाले एकहप्ता पछि थाह पाउनुभो, सुगा त घरमै छ। मलाई हेर्दै दाह्रा किट्दै मुर्मुरिनुभो, ‘पाजी, सुगा मरेको थाहा पाएँ भने मुड्क्याउँछु।’
‘मर्दैन,’ मैले भनेँ, ‘म मर्न दिन्नँ।’
बाको यही धम्कीसँगै मैले घरमा सुगा पाल्ने अनुमति पाएँ।
फट्यांग्रा र जुठो भात खाँदाखाँदै सुगा हुर्कियो।
बिस्तारै सुगाका आँखा उघ्रिए। आँखावरिपरि रंगीन घेरा बसे। चुच्चो झन् गुलाबी हुँदै गयो। र, एकदिन सुगाका पखेटाभरि सलाईका काँटी रोपेजस्ता प्वाँख उम्रिए।
बिरालोले पनि सुगालाई घरकै सदस्य मानिसकेको थियो, दिनभरि लर्खराउँदै आँगनमा हिँडिरहेको सुगालाई हेर्दै टोलाउँथ्यो। बेलाबेला सुगालाई जिस्काएझैं झम्टिन खोज्थ्यो, खेलेझैं।
आखिर पखेटामा वसन्त आएझैं सुगाका प्वाँख बाँसझैं हरिया हुँदै गए। अनि त, भुवादार मुलायम प्वाँखले पखेटा भरिए। बेलाबेला सुगा उड्न खोज्थ्यो। त्यही डरले मैले उसलाई डेरीभित्र राख्थेँ र डेरीको प्वाल कार्टुनले छोप्थेँ।
एकदिन आमाले कैंची दिँदै भन्नुभो, ‘ला, प्वाँख काटिदे। नत्र उड्छ।’
प्वाँख रेटिएपछि सुगा हुरीले पात झारेको रुखजस्तो खङरंग पर्‍यो। भ्याट–भ्याट पखेटा तन्कायो र लुत्रुक्क पर्‍यो।
सुगा हुर्किंदै त गयो तर बोल्न सुरु गरेन। मलाई त मान्छे घरमा आउनेबित्तिकै ‘राम राम’ भन्ने सुगा चाहिएको थियो। यस्तो ठुस्स परेर बस्नेवाला त होइन। बेलाबेला बिरालोले झम्टिन खोज्दा एकदुई पल्ट कराउँथ्यो, अनि दिनभरि शान्त।
‘खुर्सानी ख्वाउनुपर्छ... बोल्छ,’ मेरो समस्या सुनेर पूर्णेले सिकायो।
‘अनि राम राम भन्छ ?’
‘भन्छ। सबै थारूले सुगालाई खुर्सानी पो ख्वाउँछन्।’
खुर्सानी त घरमै फालाफाल। बारीमा गएर एउटा हरियो ‘जिरेखुर्सानी’ ल्याएँ। सुगा भान्साको संघारतिर मुडुलो पुच्छर नचाउँदै घुमिरहेको थियो। बिरालो अल्लि पर भुइँमा च्यापु अड्याएर चिम्सा आँखाले हेरिरहेको थियो।
‘पट्टु पट्टु’ भन्दै सुगालाई च्याप्प समाएँ र चुच्चो च्यातेर खुर्सानी कोचिदिएँ। उसका पखेटा बेस्मारी फड्फडाए। उड्न खोज्यो, सकेन। बुथु्रक–बुथु्रक उफ्रिदै आँगनभरि फन्का लगाउन थाल्यो।
अचानक ह्वात्त चिलले सुगालाई समायो। कहाँबाट आएको थियो चिल, थाह छैन। आफ्ना धारिला नंग्राले सुगाको मुलायम शरीर च्यापेको थियो। केही सोच्नै पाइएन। चिल बेलौतीको रुख हुँदै उड्यो।
मेरो सास घाँटीमै अड्केलाजस्तो भो। म खाली खुट्टा त्यतातिर दगुरेँ, जता चिल हुइँकिइरहेको थियो। बिरालो पनि मेरा पछिपछि दगुर्‍यो। चिलका लामा–लामा नंग्रामा कैद सुगा आकाशै च्यातिने गरी कराउन थाल्यो। मेरो हिक्का छुट्लाजस्तो भयो। चिल गोठतिर हुँदै उडिरहेको थियो।
पर खेत जोतिरहेका कान्छाबाले म रुँदै दगुरिरहेको देखे। एकछिन उनले अचम्म मान्दै हेरे र चिच्चाए, ‘के भो कान्छा, किन रोको ?’
‘मेरो पट्टु लग्यो।’
उनले आकाशतिर हेरे। चिल धेरै माथि पुगिसकेको थिएन। एउटा माटोको डल्लो समाए र चिलतिर हुर्‍याए। संयोगले, डल्लो बत्तिँदै चिलको छातीतिर बज्रियो। चिल खस्न लाको प्लेनझैं ढल्पलायो। स्वात्त सुगा भुइँतिर झर्‍यो। हतारिँदै कान्छा बाले सुगालाई च्याप्प समाते र भने–
‘लौ भाग्य रछ। फेरि पायौ। अब खुल्ला नछोड्नु।’
मैले डरले थुरथुर कापिरहेको सुगालाई लिएँ। सुगा छट्पटाइरहेको थियो। उसले चोरऔंलाको छाला निस्किनेगरी ठुँग्यो। औंलाबाट रगत रसायो। तर, मैले सुगालाई छाडिनँ। दुखाइले छट्पटिँदै घरतिर दगुरेँ।
‘नपाल भनेको मानिनस्, धन्नै चिलले खाथ्यो,’ आमाले मेरो बेहाल देखेर भन्नुभो, ‘यसरी मर्‍यो भने त पापै लाग्छ।’
मेरो रगतले सुगाको एउटा पखेटा लुछुप्पै भिजेछ। मैले पखालिदिएँ। कपडाले पुछपाछ पारेर सुगालाई डेरीको ढक्कन खोलेर भित्र हुलिदिएँ। सुगा अबेरसम्म कराइरह्यो। बिरालो पनि डेरी वरिपरि घुपमरह्यो।
आमाले फुफु गर्दै मेरो औंलामा मलहम दलिदिनुभो।
साँझ भात खाने बेला मेरो सुन्निएको चोरऔंला देखेर बाले हकार्नुभो, ‘फेरि के बिठ्याइँ गरिस्, भन् !’
म टाउको निहुराएर बसिरहेँ।
आमाले नै दिउँसोको चिल–सुगा र मेरो कथा सुनाइदिनुभो। त्यसपछि बा बोल्नुभएन। भोलिपल्ट बजारबाट फर्किंदा भने बाको हातमा गोलो पिजरा झुन्डिरहेको थियो।
पिन्जरामा हुलेको तीनचार दिनपछि बल्ल सुगा बोल्यो। खुसीले मेरा हातगोडा काँपे। त्यो सुनेर आमा पनि मुसुमुसु हाँस्नुभो।
पिजराभित्र फिजाउँदा–फिजाउँदै सुगाका पखेटा फेरि पलाउँदै गए। खानाका लागि मैले पिजराभित्रै सानो कटौरा राखिदिएको थिएँ। त्यसैमा भात, खुर्सानी र पानी आमा र मैले पालैपालो राखिदिन्थ्यौं।
करिब एक महिनासम्म ‘राम राम भन्, पट्टु’ भनेर म कराएपछि एकदिन सुगाले टर्रो आवाजमा दोहोर्‍यायो, ‘राम राम।’
लौ, सुगा बोल्ने भो। त्यसपछि त नयाँ मानिस घरमा देख्यो कि सुगा कराइहाल्थ्यो। एकदिन बा आउँदा पनि ‘राम राम’ भनेछ। बाले रमाइलो मान्नुभो।
विहिवार, २०७१ पुस १० गते २०:३५ / Thursday, Dec 25, 2014 8:35 pm